jeudi, 09 mai 2019 13:40
Tsaratanàna: Nihena hatramin'ny 70% ny tahan'ny tsy fandriampahalemana
Anisany vokatra azon’ny Foloalindahy tao anatin’ny telo volana voalohan’ity taona ity, io araka ny notanterin'ny Minisitry ny fiarovam-pirenena Jeneraly Richard Rakotonirina ny 07 mey 2019.
Nambarany fa nihena hatramin'ny 70% ny tahan'ny tsy fandriampahalemana any amin'ny Distrikan’i Tsaratanàna, basy 112 miisa sy omby 267 tafaverina ary takalonaina miisa 24 avotra soamantsara.
Irariana ny amantarana ny toby nivoahan'ny basy sy izay nanaparitaka azy.
jeudi, 09 mai 2019 13:32
Amboasary Atsimo: Niverina masiaka « dahalo niova fo »
Manao andiany aman-jatony ary sahy manafika toby miaramila ireo « dahalo niova fo » tany amin’iny Distrikan’Amboasary Atsimo iny, toy ny nitranga in-droa nisesy ny volana aprily teo.
Miisa 3000 eo izy ireo no mila fehezina, tsy hampirongatra be indray ny asan-dahalo sy tsy fandriampahalemana amin’iny faritra Anôsy iny.
jeudi, 09 mai 2019 10:42
Tsarafaritra-Andoharano: Vatobe mandondona 500kg hovakiana tsy hampidi-doza
Handray an-tanana ny fanalana ny vato io ny BNGRC, ary ezahina hovitaina ato anatin’ny roa volana eo izany. Misy ny olona folo mahery eo voatery esorina amin’ny fonenany hisorohana ny loza, na dia hatao tanana ny famakiana ny vato.
Misy vato 25 hafa ihany koa amin’ireo toerana avo eto Antananarivo renivohitra mila esorina tsy hampidi-doza.
Olona 20 mahery no namoy ainy hatramin’ny fiandohan’ity taona 2019 ity vokatry ny fianjeran’ny vato teny Ampamarinana sy Tsimialonjafy Antananarivo renivohitra.
jeudi, 09 mai 2019 10:39
CENI: Nampahafantatra ny tetikasa « lisi-pifidianana biometrika »
Nitondra famelabelarana mikasika izany tetikasa izany tamin’ireo mpisehatra amin’ny fifidianana ny orinasa VERIDOS-Identity Solution, omaly, nandritra ny sehatra ifampidinihana niarahan’izy ireo tamin’ny CENI.
Ny volana novambra 2018 no nanomboka nisy ny fifampidinihina anatiny niarahan’ny tomponandraikitra sy teknisianina eto amin’ny CENI sy ity orinasa manana traikefa iraisam-pirenena amin’ny fikirakirana ara-biometrika ity, mikasika izay fahafahana manatanteraka ny tetikasa lisi-pifidianana biometrika izay.
Mbola maro ireo pitsopitsony ilàna fandalinana momba ny fanatanterahana ity tetikasa ity, mba hifanaraka sy hirindra amin’izay lalàna mifehy ny zotram-pifidianana ny asa atao rehetra amin’izany.
jeudi, 09 mai 2019 10:16
Famatsiana rano fisotro: Fitaovan’ny FAO ho entina any Ambovombe Androy nisy nanodina
« Motopompe » sy fantsona aman-jatony isa efa namidy amoron-dàlana tetsy Antohomadinika-Antananarivo no nanaitra sy nitarika tamin’ny fisamborana ary fanokafana fanadihadiana avy hatrany.
Ny mpivarotra no voatana, mbola karohina ny tompon’ny entana.
Ny tranga toy itony dia porofo mitohoka amin’ny tenda, fa be ny tetikasa ahazoan’i Madagasikara famatsiam-bola sy itrosana nefa tsy miantraika eny ifotony.